Fianarantsoa Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay mpanary zaza
Tsy hay intsony na fakana an-keriny na fanarian-janaka no nataona lehilahy iray tratra nanary zaza iray tao Mandalahy ao Fianarantsoa omaly tolakandro. Mpifanolo-bodirindrina no mailo
ka nanaradia tamin’ny fiara ity lehilahy ity izay hitan’izy ireo nitsoaka tamin’ny bisikileta rehefa avy nanary ilay zaza. Namidiny taman’olona teny amin’ny lalany teny avy eo io bisikileta io ary nanohy ny diany an-tongotra izy. Nampandre ny zandary sy ny ben’ny tanana moa ireo mpanaradia, raha ny fitantaran’izy ireo. Tratran’ireo fokonolona ihany koa anefa ity tovolahy ity ka efa saika niharan’ny fitsaram-bahoaka raha tsy teo ireto nanaradia tamin’ny fiara voalaza teo ireto, hoy hatrany ny fampitam-baovao avy any an-toerana.